Faah faahin qasaaraha ka dhashay weerarkii Madaxtooyada iyo Al-Shabaab oo sheegatay « AYAAMO TV
Faah faahin qasaaraha ka dhashay weerarkii Madaxtooyada iyo Al-Shabaab oo sheegatay
1468 Views Date February 21st, 2014 time 3:39 pm
Inta la og yahay 11 ruux oo ay ku jiraan sagaal ka mid ah kooxihii weerarka qaaday ayaa ku dhintay weerar is qarsin iyo mid toos oo maanta duhurkii xilligii salaadii jimcaha lagu qaaday Xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Sida ay sheegayaan wararka weerarkan ayaa waxaa ku dhintay labo mas’uul sida Taliye kuxigeenkii hore ee Nabadsugida Jen. Nuur Shirbow iyo Xoghayaha Joogtada Xafiiska Ra’iisul wasaaraha Maxamuud Xirsi (Indha Case).
Dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah Wariye ka tirsan Radio Kulmiye oo lagu magacaabo Axmed Saciid, kaasoo markii uu qaraxii hore dhacay soo aaday agagaarka Madaxtooyada, si uu warbixin uga keeno, hase ahaatee uu qaraxii labaad ku dhaawacmay.
Is rasaaseyn muddo socotay ayaa ciidamada ilaalada madaxtooyada iyo dableydii hubeysneyd ee weerarka soo qaaday ku dhex maray gudaha ay soo galeen iyo banaaka, waxaana qaarkood lagu toogtay koontaroolka hore ee albaabka laga galo.
Afhayeenka howl galada Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab oo la hadlay wakaaladaha wararka ayaa sheegay in howlgalka Madaxtooyada uu ahaa mid gaar ah, isla markaana ay ka gaareen hadafkii ay ka lahaayeen, waxaa uu sheegay inay si aad ah u soo qorsheeyeen.
Kooxaha hubeysan ee weeraray madaxtooyada ayaa xirnaa dharka tuutaha ay qaataan Ciidamada Nabadsugida dowladda, waxaana goor dhoweyd afaafka hore ee Madaxtooyada lagu soo bandhigay meydadka ilaa todobo ruux oo ahaa kuwii weerarka qaaday.
Wasiirka Amniga Qaranka Soomaaliya C/kariin Xuseen Guuleed oo shir jaraa’id ku qabtay halkii weerarka uu ka bilowday ee irida dambe ee Madaxtooyada ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay fashiliyeen weerarkaas.
“Maanta xilligii salaada jimcaha ayaa koox ka mid ah kuwii nabad diidka ahaa soo weerareen Madaxtooyada, kuma ay guuleysan weerarkooda hadafkiisa oo ahaa inay galaan Madaxtooyada, nimanka weerarka soo qaaday meydkooda halkaan daadsan yahay, kuwa kale gacanta lagu hayaa baaritaan ayaa hada socda”ayuu yiri C/kariin Xuseen Guuleed oo shir jaraa’id ku qabtay albaabka hore ee Madaxtooyada.
Mr Guuleed ayaa sheegay in hadafka weerarkaas uu ahaa Madaxtooyada la weeraray in warbaahinta laga sheego, hase ahaatee ciidamada ammaanka ay si aad ah uga hortageen, ayna fashiliyeen isku daygii laga lahaa weerarkaas ee ah in dhibaato badan lagu geysto.
Wasiirka Amniga ayaa sheegay in dhowaan ay qaadayaan howl galo adag oo amniga lagu xaqiijinayo, isagoo shacabka ugu baaqay inay dulqaad muujiyaan inta howl galkaas socdo hadii ay la kulmaan culeys.
Ergeyga Qaramada Midoobey Nicholas Kay ayaa cambaareeyay weerarkan, isagoo sheegay inuu ahaa mid fashilmay, waxaa uu cadeeyay inuu Madaxweynaha khadka taleefanka kula hadlay oo uu bad qabo.
Inkastoo marka loo eego qaabka weerarka hadana waxaa uu u muuqday in bartilmaameedka uu ahaa Masaajidka Madaxtooyada oo salaada jimcaha ay ku dukadaan madaxda dowladda, sida Madaxweynaha, Ra’iisul wasaaraha, wasiirada, xildhibaanada iyo saraakiisha, hase ahaatee Madaxweynaha ayaa ku dukan Madaxtooyada oo aan imaan.
Masaajidka Madaxtooyada ku yaal ayaa dhinac xigay halka weerarka ka dhacay ee albaabka bari Madaxtooyada ee dhinaca Boondheere xiga, waxaana dadkii salaada ku dukaday qaarkood la sheegay inuu gaaray firirka qaraxii weynaa oo keenay muraayadihii inay soo daataan.
Magaalada Muqdisho ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa ka jiray falal amni daro oo ay ugu weynaayeen qaraxyada iyo weerarada tooska, iyadoo weerarka Madaxtooyada uu calaamad su’aal gelinayo sida hey’adaha amniga